Booliska Canada oo gacanta ku dhigay rag dilay wiil Soomaali ah | KEYDMEDIA ONLINE
Booliska Canada oo gacanta ku dhigay rag dilay wiil Soomaali ah
Wuxuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas looga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa. Waalidka marxuum Maxamed Yuusuf ayaa ku rajo weyn in la soo qabto kuwii ka dambeeyay dilka arxan darrada ah ee loo geystay wiilkooda.
TORONTO, Canada- Marxuumkan oo lagu dilay magaalada Winnipeg ee dalka Canada 26-kii bishii August ee sannadkii 2020-kii ayaa la soo qabtay rag lala xiriirinaayo dilkiisa.
Booliska magaalada Winnipeg ee dalka Canada ayaa xiray laba eedeysane oo aan Soomaali aheyn, kuwaas oo loo heysto darajada koowaad ee dilka.
Marxuum Maxamed Yuusuf oo ahaa qurbajoogta dalka Canada, gaar ahaan reer Toronto ayaa marka la dilayay fasax ahaan ku qaadanaayay maaalada Winnipeg, oo ah halkii lagu qaarijiyay.
Sannadihii dambe waxaa aad u soo kordhayay dilalka Soomaalida loogu geysanayo wadamada ay u haajireen, kuwaas oo mararka qaar lagu eedeeyo inay iyaga isku geystaan.
Dilkan loogu geystay wiilkan Soomaaliga ah ayaa qeyb ka ah dilal dhowr ah oo ka dhacay Canada, kuwaas oo lagu waxyeeleeyay Soomaali, waxana ugu dambeeyay, dil loogu geystay magaalada Toronto ee dalka Canada 02, Bishan September 2021 Allaah ha u naxariistee Sahal Maxamed Sahal oo 35 sanno jir ahaa.